Global Voices teny Malagasy » Fetiben’ny Bilaogy: Meksika- Misy Vahaolana Amin’ity Herisetra Ity Ve? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 03 Septambra 2011 16:13 GMT 1	 · Mpanoratra Juan Arellano Nandika (en) i Negarra Akili, avylavitra
Sokajy: Amerika Latina, Meksika, Hafanàm-po nomerika, Media sy Fanoratan-gazety
Ity lahatsoratra ity dia ampahany manokana amin'ny tatitray manokana momba ny Adin'i Meksika amin'ny Zava-mahadomelina .
Izany dia mitaky safidy sy asa an-taona maro eo amin'ny fiainana, koa ao anatin'ity ampahany fahadimy amin'ny : Fetiben'ny Bilaogy: Meksika – Vahoaka, Herisetra ary Bilaogy , isika dia hifantoka kokoa, miainga avy amin'ny fisaintsainana nataon'ireo bilaogera nandray anjara, tsy amin'ireo hevitra mivelatra be loatra toy ny tsy fampiasàna herisetra, fa amin'ireo asa tonga dia vàvany, toy ny fifanakalozan-kevitra anatiny (eto dia ny tranga ao Meksika) na ireo fanapahan-kevitry ny governemanta.
Raha apetraka amin'ny fomba hafa: Inona no tokony natao mba nanakànana ny herisetra? Juan Tadeo, ohatra, dia manamarika  [es] momba ilay volavola naroso vao haingana avy amin'ny National Autonomous University of Mexico (UNAM), na ny Anjerimanontolom-panjakana Miahy Tena, antontan-taratasy iray [es] izay manaiky ny fahasarotan'ny toe-draharaha sy mamaritra ireo olana momba ny politikam-piarovana ny vahoaka amin'izao fotoana. Mamintina i Juan :
Omar Rábogo Vital sy Lucía Bergara dia namoaka lahatsoratra iray ao amin'ny bilaogy Altoparlante, Artikla faha-19 amin'ny Animal Político  [es] izay amakafakan-dry zareo ny kabarin'ny filoha Meksikana Felipe Calderón manakiana ny herisetra. Fintinin-dry zareo amin'ny fomba toy izao ny fomba fijeriny:
Epriani ao amin'ny #SinLugar dia miresaka fohifohy lohateny mitovy amin'izay, momba ny politikam-piarovana avy amin'ny governemanta, ao amin'ny lahatsorany hoe “Ilay fifanarahana tsy eken'ny rehetra”  [es].
Efa volana enina izay no lasa hatramin'ny nanaovan-tsonia ny Fifanarahana ho an'ny Fandrakofam-Baovao momba ny Herisetra  natao hifanindran-dàlana amin'ny sehatrasa Fandraisan'andraikitra ao Meksika . Hatramin'izao, nijanona tamin'ny naha-tabataba an-gazety azy fotsiny ilay fifanekena, hevitra ara-politika tsotra izao tsy nisy vokany. Ny fanarahamaso ny media natsangana tanatin'ilay sehatrasan'io fifanekena io dia tsy nitondra vokatra na iray aza (zavatra efa tokony ho novitaina tany amiin'ny volana fahatelo). Ilay vohikala dia tsy mitatitra asa hafa ankoatry ny fivezivezen'ilay fifanarahana. Ary dia tena tsy misy hafa amin'izay efa nataony talohan'ilay fifanarahana ihany koa no asa ataon'ny media.
Sofia López Olalde, avy amin'ny bilaogy En busca de ciudades sustentables, dia manamarika  [es] amin'ireo antontanisa vao haingana izay milaza zavatra mifanohitra amin'ny kabary ofisialy belazao, amin'ny fanipihana fa i Meksika dia sady faran'izay mahantra no mahery setra.
Ao amin'ny bilaoginy Uno en la Red, i Alejandro Galicia dia manoratra  [es] momba ity “vahoaka mizaka herisetra” ity, amin'ny famakafakana ny demaokrasia Meksikana sy ny fiarahamonina ary ny fampiasàna na tsy fampiasàna herisetra ataon'ny fanjakana :
Enrique dia mizara lahatsoratra fohy roa miaraka aminà ohatra mikasika fandraisan'andraikitry ny olon-tsotra, ny voalohany avy amin'i Mopera Alejandro Solalinde  [es] ary ny faharoa  [es] mitanisa vohikalan'ny Hetsika ho an'ny Fandriampahalemana  [es]. Anaty lahatsoratra iray hafa  [es] dia manazava koa izy ny lanjan'ny fanehoan-kevitry ny olon-tsotra izay nitondra nankany amin'ny Diabe ho an'ny Fandriampahalemana  sy ny Diabem-pirenena  notarihan'ilay poety Javier Sicilia :
Ity santionany avy amin'ny Fetiben'ny Bilaogy ity dia ho fintiniko amin'ny lahatsoratra iray avy amin'i Enrique Figueroa, amin'ity indray mandeha ity dia mikasika ny fanantenana  [es] ary ny fidonanàm-poana na ny hetsika ataontsika hiatrehantsika ny zavatra rehetra. Lohahevitra goavana ho famaranana.
Izahay dia velom-pisaorana mitafotafo an'ireo rehetra izay nientanentana tokoa nandray anjara tamin'ity fetibe ity, nandany fotoana namela ny zavatra hafa (ho an-javatra izay teraka tany lavitra tany  [es] avy any Meksika, tsy dia ratsy ny vokatra); ary koa ho an'ireo nanohana anay tamin'ny fampahafantarana, ka singaniko manokana amin'ireny ry Pepe Flores avy amin'ny Vivir México tamin'ny tafatafa  [es] tam-bilaogy nahafahanay nahatratra olona maro, sy ry Ernesto Priego avy amin'ny #SinLugar tamin'ny fanelezana [es] (sy fandraisana anjara) tao amin'ny vohikala, ary ireo olona avy amin'ny Mujeres Construyendo, izay nanampy tamin'ny fanapariahana  [es] ny hetsika. Toy izany koa ho an'ireo mpampiasa Twitter izay namerina nandefa ireo antsonay ary ireo lahatsoratra fandraisana anjara arakaraky ny nivoahan'izy ireny, ambonin'ny zavatra rehetra @rabanovengador  sy @ernestopriego  izay hatramin'izao dia mitazona foana ny tenifototra #vocesmx . Misaotra ry zalahy a!
Etsy andanin'izany ny fankasitrahanay tanteraka ho an'i Adriana Gutiérrez , Cati Restrepo , Indira Cornelio  sy Soraya Sacaan , tariky ny Global Voices amin'ny teny Espaniola, izay nanao ny ho afany ka nampandeha tsara ny zavatra rehetra tamin'ny Fetibe tamin'ity taona ity. Saingy isaorako mialoha sahady ireo rehetra izay nanam-potoana namakiana ity lahatsoratra ity sy ny lahatsoratra tsirairay any ambadik'ireo rohy ery ambany, izay ahafahanareo mahita andianà bilaogy samihafa nefa samy manome fomba fijery tsy mitanila sy miavaka mikasika ilay lohahevitra. Amporisihako mafy mihitsy ny hitetezanareo azy rehetra ireo, tena ohatra velona amin'ny tontolon'ny bilaogy Meksikana. Dia amin'ny fetibe manaraka indray e!
Fanamarihan'ny mpamoaka lahatsoratra: Noho ny halavàny sy mba hahafahana mamaky azy, nanapa-kevitra izahay ny hamoaka ny fintina avy amin'ny Fetiben'ny Bilaogy ho anaty ampahan-dahatsoratra maromaro. Ato ny voalohany , faharoa , fahatelo , ary fahaefatra , ary ity no ampahany fahadimy sady farany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/09/03/22115/
 Adin'i Meksika amin'ny Zava-mahadomelina: https://globalvoicesonline.org/specialcoverage/mexicos-drug-war/
 Fetiben'ny Bilaogy: Meksika – Vahoaka, Herisetra ary Bilaogy: https://mg.globalvoices.org../2011/09/01/2011/07/30/blog-carnival-mexico-citizenry-violence-and-blogs/
 dia manamarika: http://juantadeo.wordpress.com/2011/08/10/comentarios-sobre-la-propuesta-integral-en-materia-de-seguridad-presentada-por-la-unam/
 antontan-taratasy iray : http://www.unam.mx/contenidoEstatico/archivo/files/pdfs/propuesta_s.pdf
 “Ilay fifanarahana tsy eken'ny rehetra”: http://sinlugar2010.wordpress.com/2011/08/01/el-acuerdo-del-que-nadie-se-acuerda/
 dia manamarika: http://sebuscanciudadessustentables.blogspot.com/2011/08/defendiendo-lo-indefendible.html
 Hetsika ho an'ny Fandriampahalemana: http://movimientoporlapaz.mx/
 lahatsoratra iray hafa : http://asfaltotecnicolor.blogspot.com/2011/08/la-primera-revolucion-del-siglo-xxi.html
 Diabe ho an'ny Fandriampahalemana: https://globalvoicesonline.org/2011/05/06/mexico-day-1-of-peaceful-protest-against-drug-war-violence/
 teraka tany lavitra tany : http://www.arellanojuan.com/un-recuento-personal-del-festival-de-blogs-mexico-ciudadania-violencia-y-blogs/